Mandritra ny fikarohana ny lohahevitry ny dokam-barotra, Nitranga tamin'ny infographic iray aho tamin'ny Ahoana no fomba ividianan'ny dokambarotra antsika. Ny infographic etsy ambany dia manokatra amin'ny fiheverana fa manankarena ny orinasa ary manana vola be dia be ary ampiasainy hamitahana ny mpihaino mahantra azy ireo. Heveriko fa fiheverana somary manelingelina, mampalahelo ary tsy azo inoana izany.
Ny fiheverana voalohany fa ny orinasa manankarena ihany no manao doka dia hevitra hafahafa. Ny orinasanay dia tsy manankarena ary, raha ny marina, nisy fatiantoka roa taona - nefa mbola nanao dokambarotra ihany izahay. Ny dokam-barotra, indrindra amin'ny alàlan'ny fantsona nomerika, dia tena mora vidy. Azonao atao ny mametraka $ 100 ao amin'ny kaonty sosialy na karoka fikarohana isan-tsindry ary manosika dokam-barotra lasibatra be loatra hitarika fahatsiarovan-tena amin'ny orinasanao.
Ny toe-tsaina amin'ny asa aman-draharaha dia tsy mifanaraka amin'ny statistika tena izy ao amin'ny tontolon'ny media sosialy. Momba ny a tsy mahomby ny ampahefatry ny orinasa rehetra ao anatin'ny roa taona voalohany araka ny fanadihadiana maro. raha mino ny olona fa ny orinasa antonony dia mahazo tombony 36%, ny tombam-bidin'ny tombony ho an'ny telovolana farany teo dia 7.5% ary ny maridrefy tombony medaly dia 6.5%.
Ny lisitr'i Angie, ohatra, dia nanohy niasa tamin'ny fatiantoka ary nandany vola $ 80 tapitrisa tamin'ny marketing - miaraka amina ampahany lehibe amin'izany mankany amin'ny dokambarotra fahita matetika hitanao amin'ny fahitalavitra. Raha orinasam-panjakana izay mampitombo ny vola miditra ampahefatry ny telovolana, dia sarotra izy ireo manan-karena. Tsy vitan'ny hoe tsy manankarena izy ireo, fa koa tsy manao doka mba hampahatsapana ny mpanjifany manan-karena. Ny Angie's List dia manome serivisy hiarovana ny mpanjifa amin'ny serivisy an-trano tsy ho voaviravira amin'ireo mpanome alokaloka any.
Miasa amin'ny ambaratonga samihafa ny dokam-barotra; tsy tsotra toy ny manandrana maka olona hividy zavatra izany. Nandritra ny folo taona lasa, ny atiny, ny fikarohana ary ny varotra sosialy dia mino aho fa lasa manadino kokoa ny orinasa fa ny dokam-barotra dia mila lalindalina kokoa noho ny manodinkodina ny tsy fahatokisan-tenan'ny mpanjifa. Ny dokam-barotra lasibatra amin'ny mpanjifa izay mitovy amin'ny mpihaino anao dia mampitombo ny tombom-barotra amin'ny alàlan'ny fahazoana sy fitazonana mpanjifa tsara.
Maninona no mampiasa doka?
Ny fototry ny dokam-barotra rehetra dia ny fanentanana fotsiny. Ilaina amin'ny orinasa ny fanentanana noho ny antony vitsivitsy:
tonga - Mba hananganana fangatahana ny marika, vokatra na serivisinao dia tokony ho afaka hahatratra mpihaino vaovao ianao. Ireo mpijery ireo dia efa misy amin'ny tranokala, fikarohana, media sosialy, radio, fahitalavitra ary fitaovana hafa. Mba hahatratrarana ireo mpijery ireo dia manolotra dokambarotra ireo orinasa nanambola sy nahazo azy ireo.
fomba fijery - Angamba efa fantatry ny olona ny vokatrao sy ny serivisinao nefa tsy manana fiheverana tsara momba ny marikao. Mba hanoherana ny fomba fijerin'ny marika tsy marina dia ilaina indraindray (na manakiana mihitsy) ny marika hampiasa vola amin'ny doka.
Sales - Mety hahomby ny fivarotana fiara amin'ny alàlan'ny dokam-barotra, fa kosa hanao fanamby aminao aho mba hijery doka nentim-paharazana sy niomerika mandritra ny herinandro ary hijery hoe ohatrinona ny mifantoka amin'izany discounting ary varotra. Raha ny fahitako azy dia mihena izany. Matetika kokoa noho izany dia hitantsika fa na dia azo ampitomboina aza ny varotra, ireo orinasa miantehitra aminy mandritra ny fotoana maharitra dia mety hanambany ny marika misy azy ireo.
Ahoana no fiasan'ny dokam-barotra?
Ny orinasa sy ny mpanjifa dia samy mitady ny hanatsara ny kalitaon'ny fiainany sy ny fahombiazan'ny orinasany. Na dia misy ampahany kely amin'ny mponina aza mety manana tsy fandriam-pahalemana izay manararaotra ny dokam-barotra, mino aho fa kely izany. Raha ny hevitro, ny ankamaroan'ny orinasan-tserasera sy ny haino aman-jery marketing marobe dia miasa amin'ity sehatra ity. Efa nasaina tamina iray tamin'ireo hetsika ireo ve ianao? Izy ireo dia fankalazana goavambe an'ny olona falifaly milahatra manodidina ny lampihazo miaraka amin'ny fampanantenan-dry zareo maso ny fizahana, fialan-tsasatra ary koa fiara handresena lahatra ireo vahiny hampiasa vola ary hanomboka hivarotra ho azy ireo. Vemma, fisotroana angovo MLM, vao tsy ela akory izay nakatona vonjimaika ho toy ny tetika piramida.
Na dia tafahoatra aza izany dia tsy ny mahazatra. Jereo ny dokam-barotra mahazatra an'ny Apple ary tsy hahita fihenam-bidy ianao ary hanan-karena tetika haingana. Fa kosa, ho hitanao ny tantaran'ny olona mamoaka ny fahaizany mamorona anaty mampiasa fitaovana Apple sy rindrambaiko ho fitaovana. Tandremo Doka an'i Coca-Cola ary ho hitanao ny fifantohana amin'ireo hetsika sy toerana anaovan'izy ireo dokam-barotra, manandrana manangana fahatsiarovan-tena amin'ny marika izay misy fahatsiarovana mahafaly. Tato ho ato dia tsy maintsy niasa tamin'ny fahitana zava-pisotro mamy sy ireo loza mety hitranga koa izy ireo.
Ny dokam-barotra sasany dia miasa amin'ny antony manosika hitahiry vola (fihenam-bidy), saingy misy antony maro hafa mahatonga ny dokambarotra hiasa:
manodidina - Indraindray ilaina ny doka mba hanomezana ny mpihaino isam-paritra ny zava-misy fa manana toerana eo akaiky eo ianao. Angamba mitady pizza ao amin'ny NY ianao eo akaiky eo, ary noho izany dia misy dokam-barotra pizzeria eo an-toerana manao dokam-barotra ho an'ny teny miorina amin'ny toerana misy eo amin'ny karoka na mikendry fahalianana amin'ny pizza ao anaty radius manodidina ny trano fisakafoanana misy azy ireo.
Andraikitra - Mihabetsaka ny mpanjifa no mijery tsara ireo orinasa mifantoka amin'ny faharetana, ny fahasamihafana ary ny fidiran'ny fiaraha-monina. Ny dokam-barotra dia mety mitana andraikitra lehibe amin'ny fanitsiana ny fahatsapana ny orinasa tsy manam-paharoa sy lehibe ho lasa manome vola sy vatsim-pianarana hanampiana ny vondrom-piarahamonina eo an-toerana. Salesforce dia nitazona sekoly teo an-toerana tany Indianapolis, manome $ 50,000 amin'ny fitaovana hanampiana azy ireo.
Research - Aiza no halehanao rehefa mikaroka momba ny fialan-tsasatrao manaraka ianao, ny fividianana fiara manaraka, ny fiantohana anao, na ny fandaniana lehibe hafa? Ny votoaty fampahafantarana dokambarotra hanampiana ny fampianarana ny mpanjifa sy ny orinasa dia nipoaka tato anatin'ny taona vitsivitsy. Na dia ny hampiorina ny fahatokisana sy ny fahefana amin'ny fanomezana ny fikarohana ilaina aza dia ny tanjona fa tsy ny tanjona farany amin'ny fividianana. Imbetsaka izy io no manome fikarohana voalohany na faharoa izay zaraina betsaka. Matetika aho mahita dokam-barotra momba ny atiny izay mety mahaliana ny namako ary mandefa izany any amin'izy ireo.
fihetseham-po - Nisongadina teo aloha ny fomba fanaovana dokam-barotra satria tsy hoe mampifandray am-po fotsiny ny mpihaino fa novokarina mba hitarika ny mpijery na ny mpamaky hamaky ny tantara. Ny sasany mety mieritreritra an'io ho toy ny fanodinkodinana, saingy tsy misy fanavahana amin'ny dokambarotra mahomby izay miteraka fihetsem-po.
fandresen-dahatra - Ampiasao ny fihetsem-po, matetika ny fandresen-dahatra no maharesy lahatra. Dr. Robert Cialdini mamaritra fitsipika enina enina momba ny fandresen-dahatra izay voaporofo ara-tsiantifika handresena lahatra ny mpanatrika doka - fifamaliana, tsy fahampiana, fahefana, tsy fitoviana, fankafizana ary marimaritra iraisana.
Ary Aza adino
Raha toa ny tanjona ny hanao doka ny tanjona ratsy amin'ny dokambarotra dia tsy mandeha mihitsy ny ankamaroany. Raha toa ka ratsy sy mahomby ny dokam-barotra, dia hihazakazaka mankany McDonalds isika rehetra handany fotoana miaraka amin'ny ankohonana sy boaty McNuggets! Lafo ny dokam-barotra ary, matetika kokoa, dia fanovana fiheverana sy fampitomboana ny fahatsiarovan-tena. Ny dokam-barotra, toy ny paikady marketing maro hafa, dia paikady maharitra izay manana risika kely mifandraika amin'izany.
Ahoana no fomba ividianan'ny dokambarotra antsika?
Tsy manontany tena momba ny tetika voasoratra ao amin'ity sary ity aho, fa manontany ny antony manosika ahy. Tsy eo ny dokam-barotra hamitahana na hampitahorana olona hividy. Ny dokam-barotra dia tokony hiditra am-pientanam-po raha misy vokany lehibe kokoa - saingy tsy midika izany fa fanodikodinana… midika izany fa mifandraika izany. Angamba mahazo aina kokoa aho raha ny lohateny Fomba ahoana no manosika antsika hividy. Mbola tsy nahita doka nanery ahy tsindry mihitsy aho, saingy nahita doka sasany nipaoka mivantana ny zavatra ilaiko izay nikitihako azy.
Fa kosa, ny mpanao dokam-barotra dia namorona fitaovam-piadiana andrana sy teknika samy hafa izay samy kendrena mba hisarika ny sain'ny mpanjifa. Ary na dia tsy tsapantsika foana aza, ireo tetikady ireo dia mandeha tsara avokoa.
Ity ny infographic izay itsikeraiko avy WebpageFX.
Tags: hanambaradokam-barotradokam-barotrafahefanafanentananafifanarahanatapakafihetseham-poahoana ny fanaovana dokam-barotra amin'ny fividianana antsikany fomba fiasan'ny dokam-barotraahoana no fiasan'ny dokam-barotraeritreritsikafomba fijeryfandresen-dahatrafandresen-dahatratongareciprocityfikarohanaandraikitraFanamafisana ny varotrafahampianmanodidinapejin-tranonkala fx
May 10, 2016 amin'ny 11: 50 AM
Heveriko fa ny ampahany lehibe indrindra amin'ny doka dia ny antony manosika. Raha tsy manosika ny hividy smth ny mpanjifa dia manana safidy roa isika. Na mamorona antony manosika (ohatra iPhone tonga lafatra) na manadino azy.
25 Aogositra 2017 amin'ny 1:11 PM
Tena voadinika tsara. Rehefa mieritreritra momba ny dokam-barotra ny olona matetika dia manadino zavatra roa. Voalohany, orinasa kely. Ireo orinasa madinidinika, indrindra amin'ny voalohany dia tsy manana “marika”. Ny tena ilain'izy ireo dia ny fahaizana manatona olona betsaka indrindra amin'ny vidiny ambany indrindra. Aorian'ny fisian'ny varotra tena izy vao azo atsangana ny marika. Ny tena ilain'izy ireo dia ny fahaizana milaza amin'ny olona fotsiny fa misokatra ny varavarany ary vonona hanao raharaham-barotra izy ireo.
Ny zavatra faharoa heveriko fa hadinon'ny ankamaroan'ny olona dia ny mpanelanelana amin'ny dokambarotra sy ny orinasan-doka no nametraka ny vidiny manokana. Ny vidiny dia tsy apetraka amin'ny fifandraisana mivantana amin'izay ilain'ny orinasa kely. Vonona ny hiloka aho fa ny ankamaroan'ny firafitry ny vidiny dia noforonina tsotra tsy tamin'ny rivotra manify. Raha tena mikarakara ny mpanjifany ny orinasan-doka sy ny mpanao dokam-barotra, dia ho azon'izy ireo antoka fa ny doka izay omeny dia mety kokoa ary ny tena zava-dehibe dia ny hahazo ny orinasa arahin'izy ireo vola kokoa noho izany ny vidin'ny dokam-barotra.
satria ny mpanelanelana amin'ny dokam-barotra dia mahatratra olona an-tapitrisany izay tsy midika velively hoe olona marina izany, fa vonona hividy ny vokatra na serivisy ireo olona ireo, na koa liana amin'ny vokatra na serivisy aza izy ireo. Ny paozy rehetra azo avy amin'ny orinasan-doka dia hampiharihary anao amin'ny XY na Z. Tsy nilaza mihitsy izy ireo fa hanao izay hahatonga ny olona ho eo am-baravaranao izahay. mahaliana ahy izany rehefa miteny zavatra toy ny hoe “tsy misy antoka amin'ny dokambarotra.” Ny valinteniko tamin'io fanambarana io dia: "misy antoka iray amin'ny dokam-barotra ary izany dia ny hakanao tanteraka ny volako. Na miasa amiko na tsia izay anananao dia horaisinao ny volako. ”